SONGZ Technology | Songz Mota Inodzora Mhepo Co., Ltd.
Yakagadzwa muna Chikumi, 2011 uye inotungamirwa muShanghai, Air Conditioning & Refrigeration Research Institute yakagadza nzvimbo dzeR&D mumaguta akasiyana muChina, seBeijing, Chongqing, Nanjing, Hefei, Liuzhou, Suzhou neXiamen uko kunyanya SONGZ yekugadzira nzvimbo iri uye ikozvino yave mazhinji matunhu ematunhu nekanzuru ehunyanzvi nzvimbo uye anopfuura mazana matatu mazana matatu emainjiniya matekinoroji, pakati pavo avo veatenzi degree uye pamusoro maakaunzi anodarika gumi%.
Iyo Research Institute yakanyorera zvinopfuura mazana mana emvumo, kusanganisira anopfuura zana zana epamutemo ekugadzira, uye akagadzira 2 nyika zviyero, 3 indasitiri zviyero uye anopfuura makumi mana emabhizimusi zviyero. Iyo Research Institute inoshanda muindasitiri-yunivhesiti-yekutsvagiridzana kudyidzana nemakoreji nemayunivhesiti akadai seShanghai Jiaotong University, Tongji University uye Shanghai University yeSainzi neTekinoroji mukufambira mberi kwetekinoroji, kusimudzira maitiro ekuvandudza, kurima tarenda repamusoro uye kuchinjana kwedzidzo.
Muna 2018, mushure mekunge SONGZ yawana uye ichibata zvikamu zveFinland Lumikko, iyo R&D nzvimbo muEurope yakaumbwa.
SONGZ Patents Ratidza
R & D Pfungwa
Zvichienderana nebhizimusi hombe reTIZ mumunda webhazi air conditioner, mota yemhepo inodzikamisa, njanji yekufambisa mweya kutonhodza, matori efriji mayuniti, iyo yekugadzirisa mhepo uye yefriji yekutsvagisa Institute inobata mu construciton nekushandisa gumi musimboti kugona.
SONGZ Laboratory centre iri pa SONGZ HQ, Shanghai China, yakagadzirirwa anopfuura makumi maviri seti emidziyo yakakura uye yepakati-ekuyedza ekushandisa. Mazhinji emidziyo anotungamira epamba. Iyo yemamiriro ekunze emhepo mugero, mhepo yekugadzirisa mamiriro ekuyedza bhenji, kamuri-anechoic kamuri uye zvimwe zvakakosha zvigadzirwa zvakasvika kune yepamberi yepamusoro nhanho. Iyo ine yakazara bvunzo yekugona kugona kweanodzora mamiriro ezvinhu, AC system, HVAC uye nemotokari yese. CRM system inogamuchirwa munzvimbo yekuyedza kubata iyo bvunzo, data uye zvishandiso. Muna 2016, zvakazivikanwa neIO / IEC 17025: 2005 system yeChina yenyika yekubvumidzwa sevhisi yekuongorora kuenzanisa uye muna 2018, SONGZ rabhoritari nzvimbo yakagamuchirwa neBDD seMutengesi Laboratory Chibvumirano.
Mhepo Vhoriyamu Bvunzo Bhenji
Nguva dzose Temp. & Humid Bvunzo Chamber
Yemukati Corrosion Bvunzo Bhenji
Laboratory Kuzivikanwa Certification kubva kuCNAS
Mutengesi Laboratory Certification Certification kubva ku BYD
PSA A10 9000 Chitupa
Motokari Yemamiriro ekunze Mhepo Tunnel
SONGZ yemamiriro ekunze emhepo tunnel yakabatanidza iyo inodzora otomatiki yekuongorora uye mepu system kekutanga muChina. Zvichienderana neepamusoro-tsananguro yekutora mifananidzo uye yekugadzira mifananidzo tekinoroji, iyo nzvimbo yakadzvanywa yakayerwa uye yakaverengerwa munguva chaiyo, iyo yakanyatso kuvandudza kugona kwekuyedza. Iyo zvakare yekutanga mamiriro ekunze emhepo tunnel inosanganisa 60 kW DC inokurumidza kuchaja mirwi, iyo inopa chivimbo chakasimba chekuvandudzwa kwesimba nyowani mota mota bhatiri manejimendi manejimendi manejimendi.
Iyo yemamiriro ekunze yemhepo tunnel nzvimbo iri pa SONGZ HQ, muShanghai, China, iyo inovhara nharaunda ye 1,650 m² uye ine mari yeUS $ 17 mamirioni. Yakaiswa zviri pamutemo kushandiswa muna Chikumi 2018, uye hunyanzvi hwayo hunyanzvi huri kutungamira pasirese.
Mota kutonhodza kutonhora kuita bvunzo, mota mhepo kutonhodza yakanyanya kupisa kuita bvunzo, mota kutonhodza kutanga bvunzo, mhepo kutonhodza controller calibration bvunzo, mota mhepo kutonhodza kudzora / defogging kuita bvunzo, mweya kutonhodza kuita bvunzo, mweya kutonhodza kuita bvunzo pasi pemamiriro ekushanda mumaguta chaiwo. , mota mhepo inodziya system inesimba mhinduro mhinduro.
Dhizaini uye kugadzirwa kwenzvimbo diki zvese zvinotora zvakanakisa vanopa-vatengesi muindasitiri. Solar simulation, chassis Dynamometer, fan huru, kutonhora system, bvunzo kamuri uye mimwe michina mikuru inotengwa kubva kuGerman, inogona kuteedzera iyo -30 ℃ - + 60 ℃ tembiricha yekunze, 5% -95% yeiyo humhutu hwemhepo, ine yakazara yakazara spectrum solar kuenzanisa mashandiro uye inogona kuita mana-vhiri dhiraivha chassis simba mita mudziyo.
Iyo tunnel yemhepo haigone kuyedza chete mamiriro emhepo uye kutonhodza masisitimu eakajairika emotokari dzevatakurwi, asi zvakare kuyedza kwakasimba kwemabhazi mukati memamita gumi pakureba uye gumi matani pakurema.
Kutsvagisa uye Dkukura Maitiro of New Energy
1. Tsvagiridzo nezvekushandisa kweakawanda mafiriji
Aihwa Refrigerant Ozone Inodzora Inogona(ODP) Kunogona Kudziya Pasi Pose (GWP)
2.Kushandiswa kwekusimudzirwa kwemhepo jekiseni compressor tekinoroji mumunda wemagetsi mota yemhepo kutonhodza
Mushure mekushandisa inowedzera enthalpy nekuzadza gasi tekinoroji, mune tembiricha tembiricha -25 ℃ mamiriro, mweya mamiriro mamiriro anogona kumhanya zvakajairwa kudziyisa, zvichienzaniswa zvakapfuura michina pasi pemamiriro eCOP kukosha kuchawedzera neanopfuura 30%, zvichitungamira iyo nguva ye "kutonhora" .
Kuwedzera Enthalpy nekuzadza Gasi AC dhizaini
3. Kupisa kupisa kupisa pombi:
Pombi yekupisa kubva parizvino basa yakakosha tembiricha - 3 ℃, inogona kudzikisira iyo - 20 degrees Celsius;
Iko kushanda kwesimba kuri nani pane iko iko iko kushandiswa kwePTC yemagetsi yekubatsira yekupisa nzira, tarisiro i1.8.
4. CO2 compressor application - Ultra-yakadzika tembiricha kupisa pombi / bhatiri kupisa system
Kushanda CO2 dzinongoitika kwezvakatipoteredza refrigerant;
Yakasarudzika huviri rotor yakapetwa kaviri - padanho compression, yakakwira vhoriyamu kushanda, yakaderera vibration;
Yemukati yakakwira kumanikidza uye yemukati yepakati voltage multimeter dc inverter drive, 40 ~ 100Hz, yakafara frequency renji yekushanda; Kuvimbika kwakakwirira, kushanda nesimba kwakanyanya, kureruka ；
Hupamhi hwekushanda renji, mu - 40 ℃ nharaunda tembiricha yakaderera pane yakajairwa kudziya.